Lix talobixin xun oo ku saabsan sida loo burburin karo laf dhabarkeena
Sidaas, qaabka isbeddelka, lix talooyin, waxaan soo bandhigi doonaa maqaal: "Sidee si dhaqso ah u qaadi kartaa dhibaatooyinka qoorta ah, iyo sidoo kale madax xanuun iyo tinnitus joogto ah." 1. Madaxaaga kor iyo hayso
Kombuyuutarada Kombiyuutarka: Waxtarka, faa'iidooyinka
Qodobka kore ee koolojiga Kuuriya ayaa la go aansaday markii alaab mucjiso ah uu ka muuqday suuq geeyska - BB-kareem. Qalabkani, oo xalliyay dhibaatooyin dhowr ah oo maqaarka wejiga ah hal mar - tujinta, qoyaanka, heerarka, ilaalinta, adkaysiga iyo raaxada.
WHO ayaa ansaxiyay hirgalinta daaweynta HCV si wax ku ool ah waxay ula dagaalamaan dhammaan lixda nooc ee fayraska
Daaweynta cagaarshow C si ay u noqoto mid firfircoon, dadaalka wadajirka ah ee daawada iyo bukaanku waa muhiim. Qofku wuxuu u baahnaan doonaa inuu muujiyo dhammaan rabitaankiisa si uu uga soo kabsado - inuu ka baxo caadooyinka xun, si dib loogu eego cuntadooda. si adag
Sida loo doorto qurxinta ilmaha ee saxda ah
Maaddada kiknoolajiyada - muxuu muhim u yahay eraygan u dhawaaqa ilmo! Inaad haysato qalabka is-qurxinta ee loogu talagalay ilmo micnaheedu waa tallaabo udhaxeysa qaan-gaarnimada. Taas oo ah, annaga, waalidiinta, ha ku degdegin in ay koraan -
Waa maxay foosha gaaska? Sharaxaad ka baxsan habka caanka ah
Haddii aad rabto in aad dib u soo noolaato wajiga, waxaa lagugula talinayaa in lagaa qaado habka loo yaqaan "peeling carbon". Ka dib fadhiga, maqaarku wuxuu u egyahay mid cusub, oo kor loo qaaday, qaabka dabiiciga ah ee soo noqnoqonaya. Nidaamku ma laha wax ka horjeeda. Waxay ku haboon tahay dhammaan
Waxay xanuujisaa wadnaha oo si adag u neefsaneysa - sidee ayay halis u yihiin calaamadaha caafimaadka iyo nolosha?
Dad badan ayaa baqaya marka ay wadnuhu xanuunsadaan oo si xoog leh u neefsadaan. Sababta cabsida waa mid ixtiraam leh, sababtoo ah fekerka wadnaha wadnaha ayaa si dhaqso ah u dillaacaya. Dhab ahaan, xaaladdu mar walba maahan mid halis ah. Xanuunka bidixda
Xanuunku wuxuu kordhiyaa suurtagalnimada xuubka xabka
Xiidmaha ayaa door muhiim ah ka ciyaara jidhka bini'aadamka. Hawlgalku ma aha oo kaliya dheefshiidka cuntada iyo isuduwidda nafaqooyinka. Waxyaabaha kale ee muhimka ah ee xiidmaha, sida: kicinta hormoonka iyo fitamiino,
Sameynta dhogor yaryar waa mid aan macquul ahayn. Cabbiraadkooda ayaa lagu go'aamiyey qoqobka, iyo qalab qurux badan oo xallin doona dhibaatadan ma jiraan. Si kastaba ha ahaatee, la-taliyayaasha shirkadda MARUGA, oo leh xuquuqda gaarka ah ee lagaga hadlayo suuqa Suuqa Ruushka
Sidee loola tacaalayaa xiidmaha muddada lagu jiro cillad joojinta?
Mudanayaal, isweydaarsiga darsiga shanaad, waa in loo diyaariyaa xaqiiqda ah inay galayaan farqiga da'da cusub. Iyadoo loo eegayo geeddi-socodka dabiiciga ah ee haweenka dhedigga ah, kobcinta hormoonada jinsiga ayaa si xoog leh hoos u dhacda, iyo
Sababta keentay jiritaanka isbeddelka ayaa noqda mid caan ah
Caafimaadku si toos ah ayuu ugu tiirsan yahay dhaqdhaqaaqa jirka. Taasna waan ku qanacsanahay, cilmi-baarayaashana arintan. Badanaa warqadda dhakhtarku waa dhaqdhaqaaq jireed sida habka daaweynta ama ka hortagga. Tani waxay la xidhiidhaa tan
Fidiyeyaasha daboolka - beddelka ugu haboon ee qalliinka caagga ah
Kontoroolidda waa nidaam casri ah oo loo baahan yahay oo uu bukaanku ku saxeexi karo muuqaalada wajiga iyo jirka. Uma baahna jarista iyo dharka. Marka la samaynayo balaastikada, dhakhtarku wuxuu isticmaalaa siriinjo ama cannula.
Sidee loola shaqeeyaa mammoplasty?
Haddii loo baahdo, si loo bedelo qaabka iyo xajmiga naas-nuujinta dhaqdhaqaaqa mammoplasty. Iyadoo ay ku xiran tahay rabitaanka macmiilka iyo soo jeedimaha qalliinka, naaska ayaa la kordhiyaa iyada oo la isticmaalayo implants ama la yareeyay iyada oo laga jarayo nudaha dufanka badan.
Wejiga wajiga ah: daryeelka maqaarka waa sax
Waa maxay gabadhu ma isticmaasho maaskaro daryeelkeeda! Gaar ahaan illaa xaddiga aan xadidneyn ee hadda jira waa hydrogel, budada, kareem, filim iyo dhar, dahab iyo lacag, xumbo badan iyo naqshad,
Baaritaanka caafimaadka ee haweenka: haddii isbeddelka la muujiyo?
Baaritaanka caafimaadka ma aha mid cusub oo daawada casriga ah, waa mid si wanaagsan loo ilaaway. Ku soo noqoshada wakhtiyada Soofiyeeti, waxaa jiray nidaam baaritaan caafimaad, marxaladda baaritaanka joogtada ah ee shaqada ama rugta caafimaadka si loo qiimeeyo